babimild, Author at Babi Mild Moms Club - Page 8 of 34
ဘေဘီလေးတို့အရေး ဆွေးနွေးရအောင် (အပိုင်း-၁၇)
မေး။ ။ တိုက်ခန်းနဲ့နေတဲ့ ကလေးငယ်တွေ ချူချာကြရင် မြေကြီးဓာတ်မရလို့ဆိုတာ ဟုတ်ပါသလား။ ဖြေ။ ။ တိုက်ခန်းနဲ့နေတဲ့ ကလေးမှမဟုတ်ပါဘူး။ ကလေးတိုင်း ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်အောင် ပထဝီ၊ တေဇော၊ အာပေါ၊ ဝါယောဆိုတဲ့ ဓာတ်ကြီးလေးပါးနဲ့ မျှတအောင်နေဖို့ လိုပါတယ်။ တိုက်ခန်းတွေမှာ အခင်းက သံမံတလင်းမို့ ကလေးတွေကို အောက်မချဘဲ ချီထားတာများတော့ ကလေးတွေ လမ်းလျှောက်ဖို့ မကြိုးစားတော့ပါ။ ကြမ်းခင်း ဒါမှမဟုတ် ဖယောင်းပုဆိုးခင်းထားရင် ကလေးတွေကိုလွှတ်ထားပြီး ဆော့ကစားပါစေ။ သူများနိုင်ငံတွေမှာလည်း တိုက်အမြင့်ကြီးတွေနဲ့ နေကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အားကစားကွင်း၊ ပန်းခြံတို့ကို အချိန်ပေးပြီး သွားလာလှုပ်ရှားကြလို့ ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်ကြတာပါ။ မြေကြီးဓာတ်မရလို့ မဟုတ်ပါဘူး။ လှုပ်ရှားမှု၊ ကလေးသဘာဝ ဆော့ကစားမှုမရလို့ပါ။ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားကစားရင် ကျန်းမာကြပါတယ်။ မေး။ ။ ကလေးဦးခေါင်းခွံရဲ့ […]
ဒေါက်တာ Mild နှင့် အမေးအဖြေ (အပိုင်း – ၁၂၄)
1. Phoo Phoo ဆရာ သမီးလေးက တစ်နှစ်နှစ်လထဲမှာပါ။ ငယ်ထိပ်က အခုထိချိုင့်ပြီး လှုပ်နေလို့ပါ။ ဘာလို့လှုပ်တာလဲ စိုးရိမ်ရလားသိချင်လို့ပါဆရာ။ ငယ်ထိပ်မပိတ်သေးတဲ့ ကလေးငယ်တွေမျာ အခုလို တွေ့ရတတ်ပါတယ်… တချို့ ကလေးငယ်တွေမှာ ငယ်ထိပ်ပိတ်တာ နောက်ကျတတ်ပြီး အသက် ၂ နှစ်လောက်မှ ပိတ်တာမျိုး ရှိတတ်ပါတယ်… မစိုးရိမ်ရပါဘူး… ကျန်းမာပျော်ရွှင်ပါစေ Dr.Mild —————————– 2. ငွေလ ရောင် ဆရာရှင့် သမီးလေးက ၄ လမပြည့်သေးပါဘူးရှင့်။ အမြဲလို တွန့်လိမ်ပြီး ညစ်နေလို့ ဘာဖြစ်တတ်ပါသလဲ။ တချို့က အသားညစ်တာလို့ပြောပါတယ်ရှင့်။ ဒီထက်ထူးခြားတဲ့ လက္ခဏာ မရှိရင် စိတ်မပူရပါဘူး… သေချာစေဖို့ကတော့ အပြင်မှာ ဆရာဝန်နဲ့ စမ်းသပ်စစ်ဆေးမှု ပြုလုပ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်… ကျန်းမာပျော်ရွှင်ပါစေ Dr.Mild —————————– 3. […]
ဘေဘီလေးတို့အရေး ဆွေးနွေးရအောင် (အပိုင်း-၁၆)
မေး။ ။ ဆရာမရှင့် ကလေးငယ်များ အရွယ်ပြောင်းလာရင် ဝမ်းသွားတာဟာ ဟုတ်ပါသလား၊ ဘာကြောင့်ပါလဲ။ ဖြေ။ ။ အရွယ်ပြောင်းလို့ ဝမ်းသွားတာမဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်မတို့ မြန်မာတွေက ဝမ်းလျားထိုးလို့၊ သွားပေါက်လို့၊ မတ်တပ်စမ်းလို့ ဝမ်းသွားတာလို့ ယူဆနေကြပါတယ်။ တိုက်ဆိုင်မှုသာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဝမ်းလျားထိုးရင် ကြမ်းကို ကလေးတွေက ပါးစပ်နဲ့ စုပ်တတ်ပါတယ်။ သွားပေါက်ရင်တော့ ကိုက်တတ်ပါတယ်။ ပစ္စည်းတွေ ပါးစပ်ထဲထည့်တယ်။ မတ်တပ်စမ်းတဲ့အချိန်လည်း ဒီလိုပဲ မှီရာကိုကိုင်ရင်း ပါးစပ်ထဲ လက်ထည့်တတ်တယ်။ အဲဒီလိုနဲ့ ပါးစပ်ထဲ မသန့်ရှင်းတဲ့ပစ္စည်း ပိုးမွှားဝင်မိလို့ ဝမ်းပျက်တာပါ။ မေး။ ။ မွေးကင်းစကလေးတွေကို နှာခေါင်း၊ နားရွက်၊ လက်၊ ခြေထောက် စသဖြင့် နှိပ်နယ်ပြီး ပုံစံသွင်းတာတွေရဲ့ (ဥပမာ – နှာတံပေါ်အောင် နှာခေါင်းဆွဲခြင်း၊ […]
ဒေါက်တာ Mild နှင့် အမေးအဖြေ (အပိုင်း – ၁၂၃)
1. Laymro Aye ဆရာ ၆ လသမီးလေးကို ဖုန်းက video ကြည့်ခိုင်းတာ ဆိုးကျိုးရှိပါလား။ American Academy of Pediatrics (AAP) လို့ခေါ်တဲ့ အမေရိကန်က အဖွဲ့အစည်းကြီးကတော့ ကလေးအသက် ၂ နှစ်မကျော်ခင်မှာ TV ကြည့်တာ၊ ဖုန်း၊Tablet ကြည့်တာ၊ ဆော့တာ စတာတွေ မပြုလုပ်သင့်ဘူးလို့ အကြံပြုထားပါတယ်… ၂ နှစ်အောက် ကလေးတွေ TV ကြည့်ရင်လည်း မြင်ရတဲ့ ပုံရိပ်တွေကို နားလည်မှု မရှိတဲ့အတွက် အကျိုးမရှိဘဲ မျက်စိထိခိုက်မှုသာ ပိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်… ကျန်းမာပျော်ရွှင်ပါစေ Dr.Mild —————————– 2. မစော ထွန်း ဆရာ အခု ကလေးက ၇ လပါ။ ကလေးက တစ်လတစ်ခါ နေမကောင်းဘူးဖြစ်နေတယ်။ […]
ဘေဘီလေးတို့အရေး ဆွေးနွေးရအောင် (အပိုင်း-၁၅)
မေး။ ။ ဆရာမရှင့် ကျွန်မရဲ့ ကလေးဦးခေါင်းမှာ အပူဖုလို အဖုထွက်နေပါတယ်။ အဲဒါ ဘယ်လိုလုပ်ရပါမလဲ။ တချို့ကပြောတယ်။ အဲဒါ တီဘီအဖုဆိုတာ ဟုတ်ပါသလား။ ဖြေ။ ။ ကလေးရဲ့ခေါင်းမှာ အနီဖုသေးသေးလေးတွေ ဒါမှမဟုတ် အဖြူဆံရှိတဲ့ အနီဖု၊ ရည်ကြည်ဝတ်ဆံလေးရှိတဲ့ အနီဖုသေးသေးလေးတွေဟာ ရာသီဥတုပူလို့ထွက်တဲ့ မိတ်ဖုလေးတွေပါ။ စိုးရိမ်စရာ မရှိပါဘူး။ တီဘီဖုဆိုတာ ခေါင်းမှာ ပေါက်လေ့မရှိပါဘူး။ ကလေးကို ရေချိုးပေးပါ။ တစ်ပတ်တစ်ခါ ခေါင်းလျှော်ပါ။ အေးတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာထားပါ။ ဦးထုပ်မဆောင်းပါနဲ့။ ဆောင်းရင်လည်း အဝတ်ဦးထုပ်ချည်သားပဲဆောင်းတာ ကောင်းပါတယ်။ မိတ်ဖုဖြစ်လို့ ယားတတ်ပါတယ်။ Calamine Lotion (or) Caladry Lotion လိမ်းပေးပါ။ ဆေးသောက်ဖို့ မလိုပါ။ ကုတ်မိလို့ ပိုးဝင်ခဲ့ရင် Secondary infection ပိုးသတ်ဆေးသောက်ရပါမယ်။ ဆရာဝန်နဲ့ […]
ဘေဘီလေးတို့အရေး ဆွေးနွေးရအောင် (အပိုင်း-၁၄)
ဒေါက်တာ Mild နှင့် အမေးအဖြေ (အပိုင်း – ၁၂၂)
1. Shwe PaChi သမီးက ဖျားရင် တုန်ပြီးချမ်းနေတာ။ ဘာလုပ်ပေးရမလဲရှင့်။ အသက်က ၃ နှစ်ပါ။ ချမ်းတုန်ပြီး ဖျားနေရင် ဖြစ်နိုင်ချေရှိတဲ့ ရောဂါတွေထဲမှာ ငှက်ဖျား၊ ဆီးလမ်းကြောင်းပိုးဝင်တာ စတဲ့ ပြဿနာ ကြီးတွေ ပါဝင်နေတာကြောင့် ကလေးကို ဆရာဝန်နဲ့ ပြသစစ်ဆေးသင့်ပါတယ်… ကိုယ်အပူချိန် 103 ’F ကျော်ရင် ကလေးကို ရေပတ်တိုက်ပေးသင့်ပါတယ်… ကျန်းမာပျော်ရွှင်ပါစေ Dr.Mild —————————– 2. မိုး နတ်သမီး သားက ထမင်းကျွေးလည်း မနဲကျွေးရတယ်။ ပြီးရင် နို့လည်း သိပ်မသောက်တော့ဘူး။ ငါးလပါ။ ဘာဆေးလေးတိုက်ရမလဲ။ အစာစားအောင်လို့။ ကလေးကို အသက် ၆ လအထိ မိခင်နို့ တစ်မျိုးတည်းသာ တိုက်ကျွေးခြင်းက အကောင်းဆုံး ဖြစ်တယ်လို့ လေ့လာမှုများအရ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေး […]
ဘေဘီလေးတို့အရေး ဆွေးနွေးရအောင် (အပိုင်း – ၁၃)
မေး။ ။ ဆရာမရှင့် လိုင်စင်းဓာတ်ပါတဲ့ ကလေးအားဆေးတွေက ကလေးတွေကို အစာစားစေတယ်လို့ ပြောကြပါတယ်။ လိုင်စင်းဓာတ်က ဘာလို့ အစာစားချင်စိတ်ကို ဖြစ်စေတာလဲဆိုတာ ရှင်းပြပေးပါဦး။ ဖြေ။ ။ လိုင်စင်းဓာတ် (Lysine) ဟာ လူတွေရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ အမိုင်နိုအက်ဆစ်တွေထဲက တစ်ခုပါပဲ။ လိုင်စင်းဓာတ်က လူတွေအတွက် အစားအသောက်ကောင်းစေတဲ့ ဆဲလ် (Cell) ကို နှိုးဆွပေးနိုင်တဲ့အပြင် ကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့ အင်ဇိုင်း (enzyme) တွေကိုလည်း အလုပ်လုပ်စေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လိုင်စင်းဓာတ်များသွားခဲ့ရင်လည်း မကောင်းပါဘူး။ ကလေးတွေ အစာစားစေချင်ဇောနဲ့ လိုင်စင်းပါတဲ့ အားဆေးကို အများကြီးကျွေးမိရင် “တန်ဆေး လွန်ဘေး” ဆိုသလို ကလေးက ဘာအစာမှ မစားတော့ဘဲ ဖြစ်သွားတတ်တယ်။ မေး။ ။ ဆရာမရှင့် Taurine ဓာတ်က […]
ဘေဘီလေးတို့အရေး ဆွေးနွေးရအောင် (အပိုင်း-၁၂)
မေး။ ။ ဘီပိုးရှိတယ်လို့ သတ်မှတ်ခံထားရတဲ့ မိခင်ဟာ ကုသမှုခံယူစဉ်မှာ သောက်ဆေးတွေ သောက်ရပါတယ်။ နို့စို့နေတဲ့ ကလေးငယ်အတွက် အန္တရာယ်ရှိနိုင်ပါသလား။ ဖြေ။ ။ အသည်းရောင်ဘီပိုးရှိနေတဲ့ မိခင်ဟာ ဆေးသောက်နေရပေမယ့် ကလေးနို့တိုက်လို့ရပါတယ်။ မေး။ ။ ဘီပိုးရှိသည်ဟု သတ်မှတ်ခံထားရသော မိခင်မှ ကလေးမွေးဖွားပြီးချိန်တွင် ကလေးအတါက် ရောဂါကာကွယ်နိုင်ရန် မည်သို့ဆောင်ရွက်သင့်ကြောင်း ရှင်းပြစေလိုပါတယ်။ ဖြေ။ ။ ကလေး အသည်းရောင်ဘီပိုး မကူးစေရအောင် ကလေးမွေးဖွားပြီးပြီးချင်း အသည်းရောင်ဘီကာကွယ်ဆေး ထိုးရမယ်။ ဒါ့အပြင် တတ်နိုင်ရင် immunoglobulin ပါ ထိုးထားသင့်ပါတယ်။ မေး။ ။ ကျွန်မရဲ့ရင်သွေး မွေးကင်းစ အသားဝါဖြစ်နေတာကို ဘယ်လိုကုသရပါမလဲ။ ဖြေ။ ။ မွေးကင်းစ အသားဝါတာ ၃ ရက်မှ ၅ […]
ဒေါက်တာ Mild နှင့် အမေးအဖြေ (အပိုင်း – ၁၂၁)
1. Kaung Khant သားသားလည်ပင်းက အကျိတ်ကကြာပြီ မပျောက်ဘူးဖြစ်နေတယ်။ အရင်တစ်ခါဓာတ်မှန်ရိုတ်ကြည့်တော့လည်း အဆုတ်ပွတာတဲ့။ ဆေးပေးတော့ နည်းနည်းပိန်သွားတယ်။ အကုန်တော့ ပျောက်မသွားပါဘူး။ မျက်နှာနှာခေါင်းမှာလည်း အနာတွေပေါက်နေပါတယ်။ ဘာလုပ်ရမလဲရှင်။ မျက်နှာနဲ့ နှာခေါင်းက အနာတွေကြောင့် လည်ပင်းမှာ အကျိတ်လာပေါ် တာဖြစ်နိုင်ပါတယ်… အကျိတ်နဲ့ ပတ်သက်လို့ အောက်က Link မှာရှိတဲ့ ဆောင်းပါးလေးမှာ ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်… ကလေးများနှင့် အကျိတ်ရောင်ခြင်း By Dr.Mild ကျန်းမာပျော်ရွှင်ပါစေ Dr.Mild —————————– 2. Chaw Su ဆရာရှင့် မေးတိုင်းဖြေပေးအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင့်။ သားသားခေါင်းဦးရေက ပျော့တယ်။ သူများကလေးတွေဆို ခေါင်းကျောမာနေတာပဲ။ ပြီးတော့ ရှေ့သွားလည်းပိုးစားနေတဲ့သဖုံးပေါ်မှာ ဘုပျော့ပျော့လေး ပေါက်နေပါတယ်ရှင့်။ ကလေးတစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် အရေပြား ပုံစံ တွေ မတူညီနိုင်ပါဘူး… […]